Faah faahin:- Qarax xoogan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax xoogan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sh/hoose
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax aad u xoogan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso oo saakay ka dhacay meel u dhaw goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taalla deegaanka Buulo-mareer ee gobolka Sh/hoose.
Qaraxaas ayaa sida la sheegay ahaa mid lagu aasay dhinaca waddo ku taalla deegaanka Buulo-mareer ee gobolka Sh/hoose, halkaas oo ay inta badan isticmaalaan dadka shacabka ah, waxaana la xaqiijiyay in qaraxaasi uusan wax qasaare ah geysan.
Guddoomiye ku xigeenka deegaanka Kunto-waarey ee gobolka Sh/hoose Muxidiin Khaliif Caliyow oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in qaraxaasi uu ahaa miino lagu aasay wadada dhinaceeda, islamarkaana aysan jirin cid qasaare kasoo gaartay.
Wuxuu guddoomiye ku-xigeenka sheegay in xilliga uu qaraxa dhacaayay uusan jirin wax dad ah oo wadadaasi maraayay, balse ay wadadaasi si aad ah u isticmaalaan dadka shacabka ah iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in ciidamada nabad-sugidda ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay markii dambe gaareen goobta uu qaraxa ka dhacay, halkaas oo ay ka sameeyeen howlgalo baaritaano ah, balse aanay jirin cid lagu soo qabtay.
“Qaraxa saakay ka dhacay deegaanka Buulo-mareer, wuxuu ahaa miino lagu aasay wadada dhinaceeda, ma jirto cid wax ku noqotay, qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda iyo AMISOM, waxayna goobtaasi ka sameeyeen howlgalo baaritaan ah, mana jirto cid baaritaankaasi lagu soo qabtay” Sidaas waxaa yiri guddoomiye ku-xigeenka deegaanka Kunto-waarey ee gobolka Sh/hoose Muxidiin Khaliif Caliyow.
Ugu dambeyntii, guddoomiye ku-xigeenka deegaanka Kunto-waarey Muxidiin Khaliif Caliyow ayaa sheegay in miinadaaasi loogu talo galay in lala eegto ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo xilligaasi ku wajahnaa degmada Baraawe, balse inta aysan soo gaarin goobta ay miinadu qaraxday.